Showing 161-180 of 472 items.
हृतिक रोशन र टाइगर श्रॉफको आगामी फिल्म वारमा एक एक्शन दृश्यका लागि फिल्म निर्माताहरूले पोर्चुगलको पोर्टोको प्रमुख भागहरू बन्द गरि छायांकन गरेको निर्देशक सिद्धार्थ आनंदले बताए । आनंदले भने,&rdquo;दुई मुख्य कलाकारहरूको शानदार चे�
4244 पटक पढिएको
‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ को ट्रेलर ट्रेण्डिङमा
बर्षकै प्रतिक्षित मध्येको एक फिल्म &lsquo;कबड्डी कबड्डी कबड्डी&rsquo; को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । यस अघिको &lsquo;कबड्डी&rsquo; र &lsquo;कबड्डी कबड्डी&rsquo; फिल्मलाई दर्शकले अत्याधिक रुचाएका थिए । शुक्रबार सार्वजनिक भएको ट्रेलर अहिले युट्युबको ट्र�
शुटिङका बेला हिरो-हिरोइनले होस गुमाएर बहकिएपछि...
मुम्बइ। धेरैजसो मूलधारका बलिउड फिल्ममा अन्तरंग दृश्य समावेश गरिएकै हुन्छन् । तर यसको सुटिङ निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छन् । धेरैपटक अभिनेताले सुटिङका बेला आफ्नो नियन्त्रण गुमाउने गर्छन् र निर्देशकले कट भनेपछि पनि अभिनेत्रीलाई छ�
3814 पटक पढिएको
पहिला मजा लिएर हेर्छन पछि छि-छी गर्छन- 'सरस्वती लामा'
पछिल्लो समय रक गीत गाएर चर्चा कमाउन सफल भएकी गायिका हुन् सरस्वती लामा । हाल उनी स्टेजमा कार्यक्रमहरुमा हिपहप र रक गीत गाउदै नाच्न र नचाउननै व्यस्त छिन् । &ldquo;उडि जाने हावा&rdquo; बोलको गीतबाट गायन क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन । सोलुखु�
4486 पटक पढिएको
के सलमानले : रानूलाई दिए ५५ लाखको घर ?
सोसल मिडियामा सक्रिय हुनेहरुलाई पक्कै पनि रानू मण्डल को हुन् थाहा होला । लता मंगेशकरको स्वर रहेको &lsquo;एक प्यारका नगमा हे&rsquo; गीत गाएर रातारात इन्टरनेट सेन्सेसन बनेकी रानूको जीवनले यस्तो मोड लिएको छ कि उनको संसार नै बदलिएको छ । सं�
3574 पटक पढिएको
रानाघाट स्टेशनमा गीत गाएर गुजारा गर्ने रानूको सलमान खानसँग सम्बन्ध, 'यत्तिकै हिमेशले दिएनन् मौका'
हिमेश रेशमियाले इन्टरनेट सनसनी रानू मण्डललाई बलिउडमा मौका दिएका छन् । रानूको हिमेशसँग रेकर्ड गरेको भिडियो केही दिनअघि भाइरल भएको रानू मण्डलको रेलवे प्लेटफर्ममा गाएको गीत &lsquo;एक प्यारका नगमा हे&rsquo; गाइरहेको भिडियोभन्दा बढी चर्�
भारतकी नयाँ सेलेब्रिटी रानुसँग '१० वर्षपछि भेटिन् छोरीले'
एजेन्सी&ndash; केही दिनअघिसम्म रानु मन्डललाई दुई छाक खान धौधौ थियो । उनी रेलवे स्टेसनमा गीत गाएर बस्थिन्, त्यहाँ उठेको पैसाले आफ्नो भोको पेट भर्थिन् । तर, एक दिन एक यात्रुले रानुको भिडियो खिचे, सामाजिक सन्जालमा हाले । अनि उनी भाइरल भ
के 'धिरेनले राजेशलाई चिन्दिन भनेका थिए' ?
नायक राजेश हमालको चलचित्र क्षेत्रमा दबदबा छ । हुनत, अहिले उनी चलचित्रको पर्दामा खासै देखिएका छन् । तर, पनि दर्शकमाझ उनको क्रेजमा कमी आएको छैन । भलै, उनका चलचित्रले हलमा राम्रो व्यापार गरिरहेका छैनन् । तर, केही बर्ष अघिसम्म हमालक�
मल्टि ट्यालेन्ट कमानसिङ याम्फु
पेशासंँगै कलाकारितामा जमेका धरानका मल्टि ट्यालेन्ट कमानसिङ याम्फु आजभोली म्युजिक भिडियोहरु खेल्न ब्यस्त छन् । सिभिल ईन्जिनियरिङ पेशाका याम्फु गायन क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय रहँदै आएका छन् । सानै उमेरदेखि गायन क्षेत्�
भ्वाइस अफ नेपालमा पुगेकी झुप्रिले सबैलाई रुवाइन, कोचहरुनै तीनछक (भिडियो)
आफैभित्र गुन्जिने एउटा आवाज &lsquo;दि भ्वाइस अफ नेपाल&rsquo;को ठुलो मन्चमा पुग्न सफल भएको छ। सुदूरपश्चिमको अछाम मंगलसेन ६ कि झुप्री भण्डारी भ्वाइस अफ नेपालको ब्लाइन्ड अडिसन पार गर्न सफल भएकी छिन । गीतलाई आफ्नो साथी मान्ने झुप्रीले ब्ल
रेडियाे नेपालमा रेकर्ड गरियाे प्रेम गीत -३ को शिर्ष गीत
सफल चलचित्र प्रेम गीत को तेस्रो सिक्वेल , यो वर्षको बहुप्रतिक्षित फिल्म &lsquo;प्रेमगीत&ndash;३&rsquo;को छायाङ्कन दशैं लगत्तै सुरु गरिने निर्माता सन्तोष सेनले पहिल्यै जानकारी गराइसकेका छन् । चलचित्र का मुख्य कलाकार सहित सबै कलाकारहरु फा�
'मोदीलाई पछि पार्दै सनी लियोन पहिलो स्थानमा'
भदौ ६- पूर्व पोर्नस्टार एवम् बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोन गुगल सर्चमा सर्वाधिक खोजी भएकी छन् । भारतीय प्राधनमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित बलिउडका सुपर स्टारलाई समेत उनले पछि पारेकी छन् । पछिल्लो समय भारतको प्रशारित क्षेत्र कश्मी
1644 पटक पढिएको
यस्तो छ प्रभास स्टारर ‘साहो’ को कहानी'
झण्डै ३ सय ५० करोडमा निर्माण भएको फिल्म &lsquo;साहो&rsquo; यही ३० अगस्तमा रिलिज हुँदैछ । यो फिल्ममा दक्षिण भारतीय सुपरस्टार प्रभास छन् । यही कारणले पनि फिल्मको धेरै चर्चा छ । &lsquo;बाहुबली&rsquo; पछि प्रभास यो फिल्ममार्फत दर्शकमाझ आउँदैछन् । च�
‘साहो’ पछि प्रभास : यस्तो लभस्टोरी फिल्म खेल्दै
खासमा अभिनेता प्रभास दक्षिण भारतिय अभिनेता हुन् । तेलुगु फिल्म उद्योगबाट करियर सुरु गरेका उनी ब्लकबस्टर फिल्म &lsquo;बाहुबली&rsquo;बाट यसरी चम्किए, सबैतिर उनको हाईहाई हुन थाल्यो । त्यती मात्र होइन, प्रभास अब कुन फिल्म खेल्छन्, कस्तो फ�
मेलवर्नमा मलाइकाको धमाल, 'सामाजिक सञ्जालमा भाइरल' (फोटो फिचर)
बलिउड अभिनेत्री मलाइका अरोरा ड्रेसअपका कारण चर्चामा आइरहन्छिन् । पछिल्लो पटक केही तस्वीरका कारण उनी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेकी छिन् । मलाइकाले पीच कलरको फ्रिल गाउन लगाएकी छन् । उनले मेलवर्नमा इन्डियन फिल्म फेस्टिबलका लाग�
बलिउड अभिनेत्री सबैभन्दा बढी फिट रहेकी शिल्पा शेट्टी ४४ वर्षको उमेरमा पनि जवान देखिन्छिन् । उनी सफल फिल्ममा उनले गरेका उत्कृष्ट अभिनय र फिटकै कारण सधैँ चर्चामा रहिरहन्छिन् । ४४ वर्षको उमेरसम्म पनि फिट रहेकी शिल्पालाई एउटा आय�
आजभोली नायकसँगै नायिकाले पनि महंगो पारिश्रमिक लिन थालेका छन् । केही नायिकाहरुको पारिश्रमिक अहिले चर्चित नायकको भन्दा कम छैन । हुन पनि नायिकाहरुले आफ्नो क्रेज र स्टारडमको आधारमा पारिश्रमिक राम्रो पाउनु नै पर्छ । अहिलेको समयम�
ऋतिक रोशन : बने संसारकै सबैभन्दा ‘हेण्डसम’ पुरुष
मिलेनियल सुपरस्टार ऋतिक रोशन संसारकै हेयाण्डसम पुरुष बन्न सफल भएका छन् । रोशन हिजो अगस्ट २०१९ मा भएको &lsquo;टप ५ मोस्ट हेण्डसम मेन इन द वल्र्ड&rsquo; को शीर्ष स्थानमा पर्न सफल भएका हुन् । उनका ३० वटा फिल्म बक्स अफिसमा सुपरहिट बन्न सफल भ�
बालीका तस्वीर ‘लिक’ नहुनुपर्ने थियो, 'भयो : साम्राज्ञी'
काठमाडौं &ndash; नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह पछिल्लो समय चर्चामा छिन् । केही हप्ताअघि साम्राज्ञी आफ्ना ब्यायफ्रेण्ड देवांश राणासँग इन्डोनेसियाको बाली विदा मनाउन पुगेकी थिइन् । बालीमा उनले रोमान्स गरेका तस्वीर सामाजिक स�
4868 पटक पढिएको
ब्राजिलियन स्टार खेलाडी नेयमारलाई अनुबन्धित गर्न बार्सिलोना भन्दा रियल अघि रहेको चर्चा चलेको छ । रियलले नेयमारलाई लिनका लागि पिएसजीसँग छलफल गरेको खुलासा भएसँगै उनी रियल जाने समाचारहरु प्रकाशन हुन थालेका हुन् । पिएसजीका अध्�